I-Sagittarius Njengomhlobo: Kutheni ufuna enye - Ukuhambelana
Eyona Ukuhambelana I-Sagittarius Njengomhlobo: Kutheni ufuna enye
I-Sagittarius Njengomhlobo: Kutheni ufuna enye
Uya kubathanda abahlobo be-Sagittarius ngenxa yobuntu babo obunomdla kunye nobushushu obugqithisileyo. Zisebenza ngokoqobo nangaliphi na ixesha ozibona ngazo. Akukho nto iyakwaziyo ukubamisa. Soloko ukhangela inqaku elilandelayo lomdla, kwitheko elilandelayo loluntu lokundwendwela, iiSagittarians zihlala zigqibela ngokubonakala kubo.
Nangona kunjalo, abahlali nje ngokungakhathali, bedlala kwaye bonwabile. Hayi, banobuntu obunzulu ngakumbi nobunzulu, obujolise kwiinyani zehlabathi, ifilosofi enefuthe lobukho ngokwabo. Baza kukuthatha kunye nabo, kodwa ungababambezeli nakwezinye izinto ezintsha.
Izizathu ezi-5 eziphezulu zokuba kutheni wonke umntu efuna umhlobo weSagittarius:
Banobubele kwaye banesisa kuye nakubani na okwaziyo ukuzithemba.
Banengqondo evulekileyo kwaye bhetyebhetye ekucingeni kwaye akukho ndlela bagweba ngayo.
Bathandana ngokupheleleyo nezinto ezintsha, umngeni kunye nezinto ezingezizo.
Banyanisekile kwaye bazinikele kwimpazamo.
Ukucela umngeni kubahlobo
Kunzima ukugcina kunye neSagittarius xa kufikwa kubuhlobo. Azinakubethwa. Banobubele kwaye banesisa kuye nakubani na okwaziyo ukuzithemba, ngekhe basishiye isikhephe xa kufuneka njalo. Banyanisekile kwaye bazinikele kwimpazamo.
Abakhathalele nayiphi na imivuzo, kwaye akufuneki uzive uxanduva okanye unyanzelekile ukuba uphendule ngendlela efanayo. Iya kuba ilungile ukuba uyenzile loo nto, kodwa bayenza yonke ngaphandle kwemeko. Kwaye banceda njani? Ngokwenza uhlalutyo olungenakuthelekiswa nanto kunye nokwahlulahlula ngokwenkqubo iingxaki.
Ababethi ngeenxa zonke ehlathini kwaye baya kukuxelela kwangoko ukuba kukho into engalunganga ngaphandle kokuhoya naziphi na iinkcukacha ezingeyomfuneko. Bakhathalele inyani kuphela, kwaye ngenxa yoko, kuyakubakho amaxesha apho abo bathetha nabo baphela bekhathazwa zizityholo ezikrakra abaziphosayo.
Ngapha koko, benza iinkokheli ezinkulu kunye nezikhokelo zokomoya ngokuchanekileyo kuba banoxanduva kakhulu, benomdla kwaye banamandla.
ukwanelisa njani indoda e-capricorn ebhedini
Xa kungekho mntu unesibindi sokuthatha umceli mngeni, baba ngabokuqala ukuza ezingqondweni zabantu bonke. Nokuba bagqibela ngokufumana isisombululo, baya kwabelana ngozuko nabo bonke abahlobo babo, ngaphandle kokulindela nantoni na.
Nangona kunjalo, kukho ukungalunganga okuncinci kwimeko yabo eluncedo ngokubanzi kunye nenkxaso. Bayayenza kuba ikubona ngokwenyani ukuba unxunguphele kwaye awukwazi ukuyenza ngokwakho.
Oku kuza njengesiphumo sokhuphiswano lwabo. Awunakho ukujongana nabo okanye unokuziphakamisela kwinqanaba labo.
Ngaphezulu, kuya kufuneka ucinge kabini ngaphambi kokungena kukhuphiswano ngokuchasene neeSagittarians. Banohlobo lokuhanahanisa, abakulungeleyo ukukopela ukuze bafumane inzuzo, kodwa bayacaphukisa xa ukopela.
Lumka into oyinqwenelayo kuba iSagittarians ayizukuthandabuza ukukuzisela inyani ekrakra ukuba yile nto uyicelayo. Ngaphezu koko, sukumangaliswa xa uza kubabona bekude kwaye begxile ngokupheleleyo ekusombululeni umba.
Ukufumana esona sisombululo sisiso, bafuna ukuba nenjongo, ukususa zonke iziphazamiso zangaphandle, kwaye bagxile ekufumaneni isisombululo.
Le yindlela yabo yokwenza eyona nto ilungileyo, ukuze ungakhathazeki okanye ucaphuke. Ayibangelwa nguwe, hayi kwaphela. Yiba nomonde kwaye ulinde ukuba babuyele kwinto yabo endala.
Uyakonwabela ukufumanisa ukuba bavulelekile kwaye banobuchule ekucingeni. Iimbono ezahlukileyo azizibeki phantsi. Endaweni yokuba bonwabile kwaye banomdla wokubona ezinye izimvo zivela kwimithombo eyahlukeneyo. Iinkcubeko ezahlukeneyo zinokuvelisa isisombululo esitsha kunye nengqondo.
Banomdla kwindlela abanye abantu ababujonga ngayo ubomi, indlela abahlangabezana ngayo neengxaki, kunye nezinto abaziqondayo. Bathandana ngokupheleleyo nezinto ezintsha, umngeni kunye nezinto ezingezizo. Ukonwaba nabahlobo ngelixa undwendwele ilizwe langaphandle kubonakala kuyingcinga efanelekileyo yeholide yabo.
Abantu baseSagittarian banonophele ngokwenene ngendlela abayisebenzisa ngayo imali yabo. Ukulawulwa kwezemali yenye yemicimbi embalwa ebalulekileyo abajongana nayo kugcino lwabo olupheleleyo kunye namandla engqondo. Ezi zinto azinakubakho nakuphi na ukulibaziseka.
Akufanele nokuba ucinge ngokuzama ukubakhohlisa okanye ukubakhohlisa ngemali kuba ngekhe uyithande xa befumana impindezelo yabo. Kwaye iya kuba yimpindezelo ekhohlakeleyo, ecothayo, nebuhlungu. Into eyenzekayo kukuba, uza kuphulukana nomhlobo othembekileyo onokuthi eme nawe ngokuchasene nalo naluphi na utshaba, ukuba awenzanga mpazamo.
Abahlobo abakhathalele ngokwenene
Ezi zalapha ziindidi eziya kuthembeka kubahlobo bazo nakwezona meko zinzima, nokuba ukutshatyalaliswa kusondele, abayi kushiya. Kungakhathaliseki ukuba yintoni, baya kuba nomva wakho. Nangona kunjalo, kwangaxeshanye, abayithandi into yokuba ujongane nemicimbi yakho ebabazekayo okanye ubandakanyeke nabantu bobuxoki. Bayayithiya kakhulu.
Baya kuhlala bechaza iimpazamo zakho ukuba zikhona, zonke ngenxa yokuphucula. Oku kunokubangela abanye abantu babuye umva, kodwa abo bahlala banyanzelekile ukuba baguquke. I-Sagittarians ezimbini ziya kwenza indibaniselwano yeziqhushumbisi, combo entsha ye-zodiac.
Yiba bhetyebhetye kwaye ubeke ezona zimvo zakho zilungileyo. Khupha zonke iimvakalelo zakho kunye noxinzelelo, zama ukucinga ukuba nexesha elimnandi kunye nabo, uza nemibono emitsha yemisebenzi. Uza kubona aba bantu be-Sagittarius bakhanyisa njengomthi weKrisimesi.
Nangona kunjalo, ungazami ukuwavalela ekhejini okanye ubabambe ngokuchasene nentando yabo. Baza kuzama ukubaleka, hayi ngenxa yekratshi okanye ukuzingca, kodwa kuba bengabalweli benkululeko, bengabazulazuli abazimeleyo behlabathi.
Xa befuna ukwabelana ngento, baya kuyenza. Banezizathu kuyo yonke into abayenzayo, ke yiba nomonde.
Ungaqala ukukholelwa ukuba abakhathali kangako okanye abayazi indlela yokubonisa uthando lwabo. Nangona kunjalo, inyani kukuba, bayakucotha ukukuthemba, kodwa xa bekwenzile, lindela izinto ezizaliswe luthando kunye nemfesane. Abaze benze nto ngenxa yokwenza.
Eyona nto intle malunga nabemi beSagittarius ayisiyiyo yokuba boyika ukwenza izinto ezintsha okanye ukukhusela iimeko ezinobungozi. Kukuba boyise olo loyiko.
Yiloo nto ke ithetha ukuba yiSagittarius. Kwaye bakukhuthaza ukuba wenze okufanayo, ukuzicel 'umngeni rhoqo, ukuphuma kwindawo yakho yokuthuthuzela.
Ubuhlobo beSagittarius: Ukusuka ku-A ukuya ku-Z
Umfazi we-aquarius onendoda ye-taurus
Abantu abadumileyo beAries
I-libra kunye ne-virgo ehambelana ngokwesondo
loluphi uphawu lwe-zodiac ngo-Agasti 3
Indoda yomhlaza ikwenza njani ukwahlukana